नयाँ वर्ष मनाउँने यो कस्तो तरिका ! देवर–भाउजु, साली–भिनाजु सिस्नोपानी हानाहान – Todays Nepal
नयाँ वर्ष मनाउँने यो कस्तो तरिका ! देवर–भाउजु, साली–भिनाजु सिस्नोपानी हानाहान
By टुडेज नेपाल	 On Apr 15, 2018
नयाँ बर्षलाई मनाउँने आ-आफ्नै चलन र तरिकाहरु हुन्छ । कसैले साथीहरुसँग रमाईलो गरि मनाउँछन् तर कोही नयाँ ठाउँ घुम्न गएर मनाउने गर्दछन् भने कोही परिवारसँग घरमा रमाईलो गरि मनाउँछन् ।
नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै वर्षको पहिलो दिन राम्रो कामको सुरुवात गरे वर्षभरि नै राम्रो र शुभ हुने मान्यता पाइन्छ । भने धेरैले नयाँ कामको शुरुवात गर्ने गर्दछन् भने कतिले आफ्नो नराम्रो बानि या कामलाई त्याग्ने पनि गर्दछन् ।
तर नेपालको सुदूरपश्चिमका जिल्लामा भने नयाँ वर्ष सिस्नो लगाएर मनाउने प्रचलन प्रदेश नम्बर ७ का पहाडी जिल्लामा छ । आजको नागरिक दैनिकले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ ।
पहाडी जिल्ला अछाम, डोटी, डडेल्धुरा बझाङ, बाजुरा र बैतडीमा बैशाख १ गते धुमधामले बिसु पर्व मनाइन्छ ।
आखिर के हो त यो बिसु पर्व भनेको ?
बिसु पर्व विषेश गरि सुदूरपश्चिमका सातवटा पहाडी जिल्लामा मनाइन्छ । जसमा अछाम, डाेटी, डडेल्धुरा, बझाङ, बाजुरा र बैतडी पर्दछन् । यो पर्व बैशाख एक गते मनाउने प्रचलन रहेको छ। देवरभाउजू, नन्दभाउजू र सालीभिनाजुहरूले एकआपसमा सिस्नुपानी छ्यापेर यो पर्व मनाइन्छ। देवर नहुने र नन्द नहुने भाउजू, भाउजू नहुने देवर, भिनाजु नहुने साली र साली नहुने भिनाजुले बिसु तिहारको दिनमा आफैंले भए पनि शरीरमा सिस्नो लगाउनुपर्ने परम्परा छ। हरेक वर्ष विसु पर्वमा मिठा–मिठा खानाका परिकार पकाउने र सिस्नो लगाउने प्रचलन रहिआएको छ ।
बिसुका दिन सिस्नो लगाउँदा वर्षभरी शरीरमा कुनै पनि रोग नलाग्ने विश्वास गरिन्छ । विशेष गरी देवर–भाउजुबीच सिस्नो लगाउन जुहारी नै चल्छ । तर, पछिल्लो समय भने बिसु पर्वमा सिस्नो लगाउने चलन बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । विसुको अवसरमा देउडा खेल्ने, विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन गरी रमाइलो गर्ने गरिन्छ । बिसु पर्वको दिन शरीरमा सिस्नो लाउँदा छालामा भएका खटिरा निको हुने र छालासम्बन्धी रोग निर्मूल हुने जनविश्वास रहेको छ ।
बिसु तिहारमा महिलाहरूले पुतला नाच खेल्ने रा पुरुषहरूले बिसु बाघ बनाएर दौडाउने गर्छन्। केही दिनपहिलेदेखि नै अछाम, बाजुरा लगायत जिल्लाका गाउँमा महिलाले पुतला खेल सुरु गरेका थिए। बिसु तिहारकै दिन कुलदेवताको पूजा गरी ‘गतानी डुब्का’ (स्थानीय खानाको परिकार) पकाएर खाने चलन छ। हिन्दू सम्राट विक्रमादित्यको पराक्रम र जन्मोत्सवको खुसीयालीस्वरूप पौराणिककालदेखि नै यो पर्व मनाउने गरिएको विश्वास गरिन्छ।
सूर्यले पृथ्वीको परिक्रमा वैशाख १ गते पूरा गरेको विश्वासमा पनि यो पर्व मनाइने गरेको किंवदन्ती छ। नयाँ वर्ष, बिसु तिहारका साथै चैते दशैंसमेत यसै महिना परेकाले नोकरीको सिलसिलामा भारतमा रहेका कतिपय सुदूरपश्चिमेली एक साताअघिदेखि नै घर फर्किने गर्दछन्।
हेर्नुहोस् भिडियो पनि विशु पर्वको एक झलक
सडकमा नाङ्गै हुने नायिकाले जर्वजस्ती गर्नेको तस्वीर सार्वजनिक गरिन् !
बोल्ड हुन खोज्दा के–के देखाउन पुगिन् अभिनेत्री राधिकाले ?